Ny tontolon'ny World Tourism Network dia misy an'i HE Sheikha Mai
Home » Lahatsoratra farany farany » Fizahan-tany azo idirana » Ny tontolon'ny World Tourism Network dia misy an'i HE Sheikha Mai
Fizahan-tany azo idirana • Birao fizahantany afrikanina • Airport • Associations News • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • fampiasam-bola • Vaovao • People • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Desambra 11, 2020
Omaly ny Tambajotra fizahan-tany manerantany nasaina Ny Andriamatoa Sheikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa, Bahrain mankany amin'ny tontonana avo lenta avoakany. Raha voafidy ho sekretera jeneraly ho avy izy UNWTO, izy no ho mpirotsaka hofidina vehivavy voalohany amin'ity laharana ity. Hiditra ao amin'ny CEO CEO Gloria Guevaras izy WTTC ary napetraka ho vehivavy matanjaka indrindra amin'ny fizahan-tany.
Nahatalanjona tokoa ny zava-bitany nandritra ny am-polony taona maro tao amin'ny fizahan-tany ara-kolontsaina ao amin'ny tanindrazany Bahrain sy ny tontolo Arabo. HE Shaika Mai dia toa nanetry tena sy nangina, saingy rehefa nijery indray dia nipoitra izay antsoin'ny maro azy ho olona tsy dia miresaka firy ary tena mandaitra fihetsika.
Ny mpanolotsaina akaiky azy indrindra, izay nanatrika ny fivoriana WTN ihany koa dia ny Prof. Dr. rava Aziz. Manana mari-pahaizana PhD momba ny fizahan-tany momba ny fizahantany tamin'ny (1999) sy ny mari-pahaizana Masters (1992), niasa ho mpanolotsaina, mpanao politika ary akademika tany UK, Dubai ary izy. Bahrain. Niharihary ny fitiavany ny fizahantany rehefa namaly fanontaniana izy.
Afaka mihaino ny voninahiny, misokatra amin'ny soso-kevitra izy, mila fiaraha-miasa lalina amin'ireo mpandray anjara rehetra ary mahatakatra ny fanamby goavana atrehin'ity tontolon'ny fizahantany ity. Ny tena zava-dehibe dia takany fa tsy tokony homena ny toeran'ny sekretera jeneraly noho ny fanodikodinana politika.
Zava-dehibe ny fifandraisana sy ny fandrindrana amin'ireo masoivoho hafa, governemanta, ary ireo mpitondra sehatra tsy miankina ary ny tontolon'ny fizahan-tany dia tsy maintsy miteny amin'ny feo iray.
Nanentana i Mai hoe: "Ny saram-pandraisana mpikambana dia tsy tokony ho hery manosika hidiran'ny fanjakana na hiditra ao amin'ny UNWO. Mila mamela ny mpandray anjara tsy miankina ny masoivohon'ny fikambanana mikambana. ",
Ny ahiahiny dia tsy ny handresy amin'ny fifidianana, fa ny fomba hanampiany amin'ny fomba mahomby. Ny ahiahiny dia ireo olona an-tapitrisany maro niasa tamin'ity indostria goavambe ity.
Nampiharina i Mai: “Mila fampanjariam-bola ny firenena, toekarena miankina amin'ny fizahan-tany, toy ny firenena nosy maro, indrindra any Afrika no mila fanampiana. Izahay amin'ny maha firenena nosy dia mahatakatra izany any Bahrain. ”
Alain St. Ange, minisitry ny fizahan-tany teo aloha avy any Seychelles no nanery ny hevitry ny biraon'ny zanabolana UNWTO ao Afrika. Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina mahita ny Excellency ho sekretera jeneraly azo ampiharina sy mangarahara kokoa. Izy tenany no filohan'ny mpikambana mpikambana ao amin'ny UNWTO nandritra ny taona maro.
Nanampy i Ncube fa ny ahiahiny dia ny UNWTO eo ambany fitarihana ankehitriny dia tsy mandeha tsara ary mpiambina ny sehatry ny fizahantany manerantany. Nanamafy ny ahiahiny momba ny fizotry ny fifidianana mety misy lesoka izy ary nanondro taratasy misokatra nosoratan'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO roa teo aloha, anisan'izany i Dr. Taleb Rifai (mpikambana ao amin'ny birao an'ny WTN). Ny fiahiahian'ity taratasy ity dia navoakan'ny Profesora Geoffrey Lipman, sekretera jeneraly mpanampy ary mpikambana iray ao amin'ny birao ao amin'ny World Tourism Network. Taorian'ny fivoriana, Louis D'Amore, mpanorina ny Ivon-toerana iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahantany ary mpikambana iray ao amin'ny birao ao amin'ny WTN ihany koa no nanampy ny taratasiny.
Tsy nilaza ny fizotry ny fifidianana i Sheikha Mai fa nilaza kosa fa efa namolavola drafitra hanomanana ny tenany amin'ity asa sarotra ity.
Ny fampiasam-bola, ny asa, ny fanabeazana, ny fiofanana, ny fitsangatsanganana amin'ny toetr'andro, ny fiofanana, ny fitoviana amin'ny fizahan-tany dia teboka rehetra izay toa voakasik'i Her.
Nangataka ny hifandraisana amin'ireo mpikambana WTN izy, mba hahafahany hahafantatra sy hianatra momba ny fandraisana andraikitra sy tetik'asa mendrika homarihina. Azony tsara fa ny fiaraha-miasa amin'ireo fikambanana toa ny WTTC, WTN ary ny hafa dia hampiaraka ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Ny seranam-piaramanidina, ny fiovan'ny toetr'andro dia noresahina ary ho lohahevitr'ireo tontonana famoahana WTN ho avy. Ny lisitry ny hetsika ho avy dia azo jerena ao amin'ny www.tn.travel/expo
World Tourism Network dia mpisolo vava ho an'ny tombotsoan'ny mpizahatany amin'ny fizahan-tany antonony sy madinidinika sy mpizaha tany.
World Tourism Network dia tamba-jotra mpiorina fizahan-tany any Hawaii, Etazonia any Etazonia, any amin'ny firenena mihoatra ny 120 miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fanohanana ireo orinasa kely sy salantsalany amin'ny fizahan-tany sy fizahantany. Fampahalalana bebe kokoa momba www.tv.travel